Bilxiginnaan (PPn)- Qeerroo Oromoo Ukkaamfsuu itti fufee jira!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBilxiginnaan (PPn)- Qeerroo Oromoo Ukkaamfsuu itti fufee jira!!
Bilxiginnaan (PPn)- Qeerroo Oromoo Ukkaamfsuu itti fufee jira!!
Waaqkennee Roobaa Tiksee hardha magaakaa Maqii keessaa humnoota maafiyaa pp tiin ukkaamsame.
#Hidhaa fi #Ajjeechaan Kan Nurraa Dhaabbatu #MCBO Yoo Ijaaranne Qofaa dha.
Jaal Waaqkennee Roobaa Tiksee
Guyyaa Har’aa Onk. 31 ,2020 Toora Naannoo Laaqanaatti butamuun Magaalaa Maqiitti Ukkanfamee Jira.
#Free_Jaal Waaqkennee Roobaa Tiksee
Weellisaa Michuu Seenaas Harargee Gaara Muul’ataatti Humnoota Bilxiginnaan Ukkaamfamuun himamaa jira.
Oda Labsi Fajji
Weellisaa Michuu Seenaa Godina Harargee Bahaa Aanaa Guraawwaatti geeffamuudhaan mana hidhaa galfamuu hiriyaan isaa OMN-tti hime.
Weellisaa Michuu Seenaa qabsa’aafi misseensa Hawwisoo Waraana Biliisummaa duraanii yeroo ta’u, bara 2018 yeroo hooggansi dhaaba ABO gara biyyaatti deebi’e qabsaa’ota Oromiyaatti deebi’an keessaa nama tokko ture.
Weellisaa Michuu Seenaa walleewwan warraaksaa fi Aadaa hojjetuun kan beekamu, erga gara biyyaatti deebi’ee waggaa lamaaf magaalaa Finfinnee keessa jiraachuusaa hiriyaansaa kun ni hima.
“Torban kana bakka buuteesaa dhabnee barbaadaa turre” kan jedhu hiriyaansaa “Guyyaa har’aa Harargee Bahaa Aanaa Guraawwaatti hidhamee jiraachuusaa dhageenye” jechuun dhimma Michuu waan quba qabu nuuf himee jira.
Hiriyoonni Michuu Seenaa, Guraawwaatti hidhamuusaa dhaga’nii gaafachuuf bakka sana deeman namoonni lama Michuutti dabalamanii hidhamanii jiru jechuun OMN-tti himeera.
‘Weellisaa Michuu Seenaa erga Dhaabni ABO Eertiraarraa gara Biyyaatti deebi’uun sochii qabsoo kara nagaa eegalee as, hirmaannaa siyaasaa kam keessattuu mullachaa hin jiru’ jechuun hiriyaansaa kun OMN-tti yoo himu “diina qabsoo Oromootti hin gammadnetu, hirmaannaa Michuu kanasn duraatiif qiimii qabatee isa miidhaa jira jedheen shakkas” jechuun himee jira.
Waraqaa Obbo Leencoon dhiheessan
Marii guyyaa kaleessaa paartileen adeemsisan irratti Obbo Leencoo Lataan ‘Itoophiyaatti si’a sadii carraan argamee maaliif gara dimokiraasiitti cehuun dadhabame?’ qorannoo jedhu dhiheessuu BBC’tti himan.
Qorannoon kuni madda rakkoo fi furmaata akkasumas carraan amma jiru jedhan akka hin dogogorre akeeka jechuun dubbatan.
Kana dura, mootummaa gonfoo irraa mootummaa dargiitti, dargiirraa ADWUI’tti akkasumas boodarra filannoo bara 1997 carraan dimookiraasiitti ce’amuf ture milkaa’uu dhabu himu Obbo Leencoon.
”Kuni maaliif ta’e? Of duuba deebinee yoo sana ilaalle badii gaafa sana goone qajeelfanne malee si’a afraffaa amma nu dhufe kanas dogongoru keenyatu mala,” jedhan.
Nami gameessi siyaasaa Obbo Leencoon akka furmaataatti wanta kaa’an akkanaan dubbatu.
”Furmaanni isaa aadaan jijjiiramuu qaba. Aadaa polotikaa hin qabnu. Aadaa polotikaa horachuu qabna. Caasaa polotikaa hin qabnu. Dimookiraasii hin qabnu. Suni, ijaaramuu qaba. Kunimmoo yeroo fixa.”
Madda suuraa: FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG
Guutuu isaa: https://bbc.in/2HNJ1ke
Tortora’an udaan laaqa!
Gadamoojjummaan siyaasaa waan dubbatan walaalchisa:-
Namni totorae sammuutu jaamaa. Kanaaf akka ijoollee yaada waanuma argee bukeessa. Leencoo Lataa eega totoraeera. kanaaf diina Oromoo OPDOtti kuuluu gale.
Yeroo OPDOn ilmaan Oromoo fixu hin dubatu. Amma gadi baheet wahee Demokirasii xibaara ilaalaa.
“…Itoophiyaa keessatti aadaan Siyaasaa jijjiiramu malee sirna demokiraasii ijaaruun hin danda’amu.” Jedha jaarsi sammuun isaa arrii baasee totora’e. Sammuun arrii baafnaan raatuu ta’u.
Deebii ani kenneef hubadhaa.Siyaasaa Itophiyaa kan jijjiiru aadaa miti. Sirna Minilik Hayilasillaaseefi Dargii dhiiga nafxanyoota keesa jiru jijjiirudha. Sirin “Ahadaawwii” hundeen isaa buqaee badu malee sirna Deemokraasii ijaaruu hin danda’amu.
Sirnatu aadaa ahaadaawwii jijjiira malee aadaa sirina ahaadaawwii jijjiiree demokraasii hin fidu.
Totora’a lammaafaa. “Itoophiyaa keessatti siachi demokiraasii ijaaruuf hiree qabnu baay’ee xiqqaadha. Sababni isaa karaa gara demokraasii geessu dhiifnee gara demokraasii bira darbineera.” Kana anatu jedhe totora’aan OPDO Namani gaaftokko OPDO wajjin oolee akka namaatti hin yaadu akka beelladaa yaada malee. Leencoo kanaaf akka namaatti yaaduu dadhabet OPDOn waggaa 29 sanyii duguggaa raawatetti kooluu galee miseensa ta’e. Yeroo ammaa OPDOfi Nafxanyaan Oromoo oggaa fixani balaaleefachuu dhiiseet wahee demokiraasii xibaara gadamoojjin.
“Qorataan yakkaa yakkamaa yoo ta’e firiin qorannoo yakka. Yakkamaan dhugaa waan awwaaluf dhugaan awwaalamuun yakka 2ffaadha.
Dhugaa awwalanis rirmi hin nyaatu!”
OMN: Labsii Qeerroo (Onk 31, 2020)
Dargaggoon Ifaa Galataa jedhamu Wallagga Bahaa Ebentuu Qellootti har’a Onkoloolessa 31,2020 waraana mootummaan ajjeefame isa kana.
Yeroo Motummaan seeraan ala Biyya bulchu kana Leenco Lataa Diina Nagawoofi namoonni hafan Namoota Harka duuban Abiy wajjiin tahani Oromoo fixaa jiran wajjiin Mooraalii kaminii OroMara je’ani walgahi ta’an? Waan biraa dhiisa Walgahii Adaamatti ta’e kana kaayyoon walgahicha Afaan kaaniin barreesani Afaan Oromon nama hin barresine akkamumatti Dhimma Oromo dubbachuuf Moraali qaba? Gantootaa fi Garaan bultoota qabso keessa arihuun barbaachisaadha.
Galaanaa Gaaromsaa Osoon biyyee ta’e Hacee galcha New Oromo